ကဲ ကို ကဲ လွန်း တယ် ….တဲ့လား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ကဲ ကို ကဲ လွန်း တယ် ….တဲ့လား။
ကဲ ကို ကဲ လွန်း တယ် ….တဲ့လား။
Posted by ဇီဇီ on Jun 2, 2013 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Copy/Paste, Creative Writing, Facebook, Members | 66 comments
ဒါက ကိုအောင်ခိုင်ရဲ့ အတွေးနဲ့ အရေးပါ။
သည်လော က် တောင် သဲ သဲ လှုပ် ဖြစ် နေ ကြ ရ သ လဲ။
နယူးယောက်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်ရင်လတ် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတော့ တနာရီမပြည့်ခင်အချိန်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာ အလုံး ၄၀ မှားလို့ဆိုပြီး FB မှာဝေဖန်ပြီး ပြောကြဆိုကြ ဒေါ်စုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဗျ။ တချို့ကလည်း ဒေါ်စုကို ချီးကျူးပါ..သူများကိုတော့ မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့ စသဖြင့့်် ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်။
ဒေါ်စုကို မနှစ်သက်တဲ့သူ ဘက်က စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ပေါ့လေ။
ဘာဖြစ်လို့များ ဒေါ်စုကို လူတွေက (မြန်မာသာမက တကမ္ဘာလုံး) သည်လောက်တောင် သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြ လေးစားကြ ချီးကျူးကြ တသသ တရွရွ တမမ တဖွဖွ ဖြစ်နေရလဲ။ ကဲကိုကဲလွန်းတယ်.။
ဒေါ်စုကို အောက်တန်းကျမိုက်ရိုင်းစွာ အပုပ်ချ ရေးသားနေတဲ့ ၀က်ဆိုက်တခုမှာလည်း ဒေါ်စုရဲ့မကောင်းကွက်တွေကို ရှာကြံပြီး လုပ်ကြံအပုပ်ချကြတယ်။
သန်းပေါင်း ၆၀ လူဦးရေမှာ သူဦးဆောင်မှပဲ တိုင်းပြည် တိုးတက်ပြောင်းလဲ တော့မှာလား.. သူတယောက်ပဲ ရှိသလားလို့။ ဒီလိုပြောင်းပြန် တမင်စဉ်းစားကြည့်ကာမှ အဖြေတွေကပေါ်လာပါတယ်။
မြန်မာလူဦးရေ သန်း ၆၀စလုံး အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ဂျပန် ထိုင်း တရုတ်တို့မှာလည်းပြည်သူတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကြပါဘူး။သို့သော် နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်များ လူကြီးများ ကတော့ vocabulary, pronunciation, intonation, tone, grammar, usage, ကအစ ကျွမ်းကျင်နေရမှာပါ။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံလို့အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီအရည်အချင်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။
Something special, everything normal ဆိုတဲ့ စကားလို အရာရာသော ရှုတ်ထွေး ကျယ်ဝန်းလှသော ပြသနာကိစ္စကြီးငယ် တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း(မှန်ကန်စွာ) ခြုံငုံဆင်ခြင်နိုင်သော အထွေထွေ ဗဟုသုတနဲ့ အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတွေကို အဂတိတရားမပါ အမြင်ကြည်လင် မတိမ်းမစောင်း စေ့ငုသေချာ ဂဃနဏသိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။
လူတိုင်းဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလိုချောမော လှပနေစရာမလိုပါဘူး။ သို့သော် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လူဘုံအလယ်မှာ တင့်တယ်ခန့်ငြား ကျက်သရေရှိသော မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်လေးစား လောက်သော (ဒီခေါင်းဆောင်ဟာ အတွင်းစိတ်ကောင်းပါ့မလား..ဟု သံသယ လုံးဝမရှိနိုင်လောက်သော) မျက်လုံး နှုတ်ခမ်း နဲ့ မျက်နှာ သွင်ပြင်ရှိရ ပါမယ်။ အ၀တ်အစားအရောင် ဒီဇိုင်း ရွေးချယ်မှု ကိုယ်နေလှုပ်ရှားဟန် များကလည်း ခန့်ငြားတည်ငြိမ် မဟော့ရမ်း မကလက် ပဲ ဆင့်ရှိအတန်းရှိ နန်းဆန်ရပါမယ်။ ဒီအရည်အချင်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။ ဒါတောင် အသက်ကြီးသွားလို့။ ခုနေများ ၅၀ကျော်လောက်ဆို ကောင်းလေစွ။
တက္ကသိုလ်ကရတဲ့ဘွဲ့မှ ပညာလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ လူမှာ အတတ်ပညာ အသိပညာ နှစ်မျိုးမျှတစွာ ရောစပ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကျော်ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးက နိုင်ငံေ၇း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံများနဲ့ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်များစွာ၊ ရောက်လေရာမှာ လေ့လာဆည်းပူးတတ်တဲ့အကျင့်၊ အိမ်မှာ အကျဉ်းကျနေစဉ်ဖတ်ရှုခဲ့တဲ စာအုပ်များစွာကြောင့် ဒီအရည်အချင်း လည်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။
၅။ သီလ သမာဓိ
နိုင့်ငံခေါင်းဆောင် ဆိုတာ သာမန်ပြည်သူလို သီလမလုံ တရားမရှိ နေချင်သလို နေမရပါ။ ကြံဖန်ပြောရရင် ဒေါ်စုဟာ လူမျိုးခြားကိုလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းကလွဲလို့ ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင်ဘ၀တလျှောက်လုံးနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ခြင်း၊ (လူမျိုးခြားဆိုပေမဲ့ ဒေါ်စုအား ချစ်ခင်လေးစား တန်ဘိုးထားနားလည်ပေးတတ်တဲ့ ပညာရှိတဲ့ မိမိနှင့် သားများ ကိုပါ ဗုဒဘာသာသို့ပြောင်းလဲခဲ့နိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။)၊ အိမ်တွင်းအကျဉ်းကျစဉ် ၀ိပသနာတရားအားထုတ်မှုကို မပြတ်လေ့ကျင့် ပွားများခဲ့ခြင်း ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဆုံးအမကို မပြတ်ခံယူခြင်း တို့ကြောင့် ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။
သာမန်လူတိုင်းဟာ မနော ၀စီ ကာယကံများကို အချိန်နဲ့အမျှပြုနေကြရာမှာ အမှတ်တမဲ့ သတိကင်းမဲ့လျက်နဲ့ အမှားများစွာ ပြုပြောတွေးနေမိတတ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့ အမူအရာ စကားလုံး ကိုယ်နေ ဟန်ပန် တို့ကိုကြည့်ပါ။ ထိုင်နေလျှင် ခါးစန့် ခါးမတ်၊ ဦးခေါင်းကိုမတ်၊ ပျင်းပျင်းရိရိကြောကို မမှီ၊ ဒူးကိုဘယ်တော့မှမချိတ်၊ မိန့်ခွန်းများပြောရာမှာ မည်သည့်ဘာသာစကားကိုပြော ပြော လေသံအတက်အကျက မမြင့်လွန်း မနိမ့်လွန်း မနှေးလွန်း မမြန်လွန်း၊ ပျာယာမခတ်။ ရှူးရှူးရှဲရှဲမရှိ။ မှားလို့ပြန်ပြောရသည်ဆိုသည် မရှိသလောက်ရှား။ ဒါကသတိကပ်နေခြင်းရဲ့ သက်သေ။ အသံကလည်း ပီသ၊ မျက်နှာအမူအရာက တည်သင့်လျှင်တည် ရီသင့်လျှင်ရီ ပြုံးတန်ပြုး ထုံပေပေ ပေါတောတော စပ်ဖြဲဖြဲ ဘယ်ခါမှမရှိ၊ ။ သည်လောက်မအားသည့်ကြားက အ၀တ်အစား ဘိုသီဘတ်သီ မရှိ။ ဒါကြောင့် သတိ ဟူသော…ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။
အဆိုတော်များ တမျိုးစီ အသံကောင်းကြပါတယ်။ သီချင်း မဆိုလည်း အသံကောင်းသူ များစွာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းရဲ့အသံများမှာ အရောင်လေးတွေပါကြပါတယ်။ အားငယ်သံ မောက်မာသံ အထက်စီးသံ မာနသံ ကြွားဝါသံ ပညာရှိသံ ပညာမဲ့သံ ရိုးသားသံ မြို့ပြသံ ကျေးလက်သံ ဟန်ဆောင်သံ တရားသံ ဆရာကြီးသံ…ပွဲစားသံ ..ထုံထိုင်းသံ..ပျင်းရိသံ…စသဖြင့်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၏အသံကတော့ ပညာရှိသံ ပြတ်သားတိကျသံ ရိုးသားဖြူစင်သံနဲ့ တိုင်းသားပြည်သူများအပေါ် မေတ္တာစေတနာငွေ့ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ အသံဖြစ်ရပါမယ်။ ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။
ဘယ်လောကမှာမဆိုအောင်မြင်လာမဲ့သူဟာ ရှေ့ကမျိုးရိုးရှိချင် မှရှိမှာပါ။ မျိုးရိုးရှိတိုင်းလည်း ဆက်ခံတဲ့သားသမီးမြေးမြစ်က အဖြစ်ရှိ ချင်မှရှိမှာပါ။ ဗိုလ်မင်းရောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစတဲ့ သတ္တိပြောင်တဲ့ မျိုးရိုးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့သွေးနဲ့ မျိုးရိုးအရည်အချင်းမျိုး အကိုမှာတောင် မရှိဘဲ ဒေါ်စုမှာသာလျှင် ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။ အင်မတန် မြန်မာဆန်ပြီး အနေအထိုင် လိမ်မာ ကျစ်လျစ်တဲ့မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည့်ရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှု ဟာလည်း မြန်မာဆန်တဲ့ သတ္တိရှိရဲရင့်တဲ့ သမီးကောင်းလေးကို ပေါ်ထွန်းစေ ခဲ့တာဟာ ငြင်းမရပါဘူး။
နေက္ခမ္မပါရမီလို့ပြောရင် လွန်မလား မသိ။ တိုင်းပြည်ကို ခေါင်းဆောင်မဲ့သူဟာ ပုဂိုလ်ရေးရာ family / personal ခံစားချက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျစ်လှူရှုနိုင်ရပါမယ်။ မိမိဘ၀နဲ့ အချိန်တွေ စိတ်အာရုံတွေကို နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက် ပေးဆပ်နိုင်ရပါမယ်။ ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိကြောင်းကတော့ မိန်းမတသန်းမှာ တယောက်တွေ့ရနိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ သားတွေရဲ့ ဘ၀အဆင်ပြေမှုတွေကို လုံးလုံးလျားလျား လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့စိတ်ထားမျိုးကတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
သတ္တလောကကြီးကို ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသော အရာဟာ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာပါပဲ။ မိမိ မိသားစုဝင် သုံးယောက်က် သန်းပေါင်း ၆၀သော လူသားတွေအတွက် မေတ္တာကြီးစွာထားခဲ့သူပါ။ မေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်ဝလွှမ်းခြုံနေတဲ့မျက်ျနှာ မျိုး လူတိုင်းမှာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ထိုအရည် အချင်း မေတ္တာဓါတ်မျိုး ဒေါ်စုမှာသာ ၁၀၀% ရှိကြောင်း ဦးနှောက်မှန်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားက ခံစားလို့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်…..
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ရေးအတွက် ဦးဆောင်ရမဲ့ နှစ်တရာတခါ ပေါ်ပေါက်ခဲတဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် သည်လောက်တောင် သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြ လေးစားကြ ချီးကျူးကြ တသသ တရွရွ တမမ တဖွဖွ ဖြစ်နေကြတဲ့ လူတွေ လုံးဝ မလွန်ပါဘူး ။
ကျနော်အခုလို ထင်မြင်ရေးသားမိတာလည်း မလွန်ပါဘူး… ဒေါ်စုကို ချစ်ရင်လေးစားရင် ချစ်နေယုံနဲ့ မပြီးပဲ မိမိတို့ရောက်ရာနေရာတိုင်းမှာ ပြတ်သားရဲရင့် ထက်မြက် တည်ငြိမ်စွာ မြန်မာလူမျိုးသိက္ခာထိန်းကြပါ လို့ရဲရဲကြီးပြောရင်း..
ရေးသူ ကိုအောင်ခိုင် ကိုရော၊ မျှဝေသူ ကေဇီ ကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို လူမျိုး ကိုမှ ဒီလို အခွင့်အခါပေးချိန် တိုင်းပြည်က အသုံးမချနိုင်ရင်တော့ သူကြီးမင်း ညွှန်းလေ့ရှိတဲ့ နှစ်တစ်ထောင် ကျိန်စာဘဲ။
သူ က ကိုယ့်သဘောမလိုက် ချိန်မှာ ဆဲ တတ်ဖို့ဘဲ သိပြီး သူက ကိုယ့်အကျိုး ကို အဖက်ဖက်က အနစ်နာခံပြီး လုပ်ပေးခဲ့တာ၊ လုပ်ပေးနေဆဲ ဆိုတာ မသိလောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ ဆိုတာ ဒီလို ခေါင်းဆောင် နဲ့ မတန်ဘဲ ပါးစပ်ထဲ ပြောင်းထိုးထားတဲ့ အာဏာရှင် နဲ့ ဘဲ တန်တာ သိကြဖို့ဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ပြောပြီးသား စကား၊ အမှောင်ထဲမှာ လျှောက်နေရတာ မို့ မှားတာ မှန်တာ လက်ရှိပြောမရတာ၊ အချိန်ကိုစောင့်ပြီး ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ အလင်းကို ရောက်အောင် သွားရမှာ။
ဒါကို ဒီလို မျိုး စကား တွေ ထွက်တာ အာဏာရူး တွေအတွက် အကြိုက်ပေါ့။
ဒီလူတွေ လက်ထဲ မှာ အာဏာရှိနေဆဲ ဆိုတာ မေ့ကုန် ပြီလား လို့သာ အော်ပြီး မေးချင်တယ်။
သူများတကာ ခေါင်းဆောင် (ဦးသိန်းစိန် အပါအဝင်) တွေကို ယှဉ်ယှဉ် ပြီး အပုတ်ချတာ ကို အရီးလဲ မကြိုက်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာလဲ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေမှာ အသေအချာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ပြည်သူကိုချစ်တဲ့ သူ့စိတ် ကို သိနေတာမို့ ပြည်သူ တွေ အတွက်ထားတဲ့ သူ့စေတနာ ကိုတော့ အပြစ်ဆိုစရာ တစ်ကွက်မှ မရှိပါဘူး။
ဒီ ပို့(စ) က ကျနော် စကက်ဂျူးလုပ်ထားတာ။
ကျနော် တင်ချင်တဲ့ ပထမ ပို့(စ) က နောက် ရောက်သွားပြီပေါ့။
ဒီလ က သူ့ မွေးနေ့လမို့ရော၊ အတွေးတိမ်တိမ်နဲ့ သူ့ကို မျက်ကန်းဝေဖန်နေတဲ့ လူတွေ များများတွေ့နေရလို့ရော။
ဒီလ ကို သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပို့(စ) တွေ ချည်း ရှယ်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားတယ် အရီးရေ။
လောဘီ တယ် ပြောလဲ အပြောခံတော့မယ်။
သူ့လောက် အရည်အချင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုတောင် လိုအပ်ရင် စိတ်ထဲကမပါလည်း မြှောက်ပင့် စား ရသေးတာဆိုတော့။
ဒီ တစ်သက် နောက်ထပ်မမြင်နိုင်မဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင် အတွက်မို့ ပါ။
သူလို အရည်အချင်းက ကြိုးစားတဲ့လူ ရနိုင်တယ် ဆိုရင်တောင်
သူ့လို စေတနာမျိုး ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် နောက်တစ်ယောက် မပေါ်တော့ပါ။
ဒါကို ကန်းနေတဲ့သူတွေ ကန်းတုန်းဆိုတော့လည်း မပြောလိုတော့ပါ။
ပို့ (စ) တက်မှတော့ မထူးဘူး။ ကျနော် ကြိုက်တဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို ထပ်ရှယ်ပါ့မယ်။
နှိုင်းယှဉ်ပြောတာ၊ တူ ယှဉ်တွဲပြောတာ ကျနော်လည်း မခံစားနိုင်လို့ပါ။
” ဒီလို ခေါင်းဆောင် နဲ့ မတန်ဘဲ
ပါးစပ်ထဲ ပြောင်းထိုးထားတဲ့ အာဏာရှင် နဲ့ ဘဲ တန်တာ သိကြဖို့ဘဲ “
အမေစုစကားပြောတဲ့အခါ ထူးခြားမှရှိတာလေးကိုတော့ … သတိထားမိခဲ့တယ် …
နှုတ်ဖျားက ထွက်တဲ့ စကား အခွန်းတိုင်းက လက်လွတ်စပယ် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ပြောခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲ … ဦးနှောက်အသိက ထိန်းချုပ်ပြီးထွက်လာတာဖြစ်ကြောင်း … စကားပြောတဲ့ အဖြတ်တောက် ၊ မျက်လုံးအကြည့်တွေကပါ သက်သေထူနေသလိုပဲ …မြင်တဲ့လူဘက်က အဲ့လို ခံစားမိတယ် ။
သူ ပြောတဲ့ စကားကို စကားအတိုင်း နားထောင်ရင်တော့ နားလည်ဖို့ အတော်ခက်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့ ညီမလေးရယ်။
ကိုယ်လည်း တစ်ခါတစ်ခါ သူ ဘာလို့ အဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်၊
ဒီ စကားနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်အထိ သူ စဉ်းစားပြီး ပြောသလဲ လိုက်မမှီပါဘူး။
တစ်ချို့က ကိုယ်လည်းမတတ်ဘူး။ ဒါမဲ့ လေ စိုက်ပြီး အလကားရတိုင်း၊ သူ့မှာ သေနတ်မရှိလို့ ဝေဖန်မယ်၊ ဆဲမယ် ဆိုတဲ့ လူတွေလိုတော့ မစော်ကားနိုင်ရိုးအမှန်။
သူ့ကို ယုံကြည်တာ တစ်ခုတည်းနဲ့ ဘက်မတိုက်ပဲ သူလျှောက်တဲ့ လမ်းဆုံးအထိ လိုက်မယ်ပဲ တွေးထားပါရဲ့။
သူ့ကို ဝေဖန်နေကြတာ သူ့ထက် ပါဖက်ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးများ သူတို့တွေ တွေ့ထားပြီလားလို့လေ။
ဟုတ်တယ် အစ်မရေ .. စကားအချို့ရဲ့ အတိုင်းတာက … . ကိုယ်အတွက်တော့ အပြည့်အ၀ ရာနှုန်းပြည့် နားလည်ဖို့ …မလွယ်ပါဘူး … ။ သာမန်လူတယောက် ..အတိုင်းတာနဲ့ ဥာဏ်မမှီပါဘူး ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … အမေစုကိုတော့ အရမ်းသဘောကျတယ် … ။ အနှစ် 20ကျော် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခံထားခဲ့ရတာတောင် မယိုင်လဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အာဃာတ မထားခဲ့တဲ့ စိတ်တွေကြောင့်လည်း ပါတယ် … ။
ဦးသိန်းစိန် ကို ရော သူ့မိသားစု မှာပါ နာမည်ပျက်မရှိတာ လူတိုင်း အသိဘဲ။
ဒါကို ဒိုင်းကာ လုပ်ပြီး အများစု ရေပေါ်စီ အတ္တသမား အာဏာရူးများက နောက်မှာ ထင်တိုင်းကြဲ နေဆဲ ဆိုတာ လဲ လူတိုင်း အသိဘဲ။
အဲဒီ အသိုင်းအဝိုင်းထဲ က အများစု ဟာ ကိုယ့်အမေအရွယ် ကိုတောင် ဒေါ်တပ်မခေါ်နိုင်လောက်အောင် ရိုင်းတယ်။
အခု လူအများစု မူဆလင်လူမျိုး တွေကို ဝါးလုံးရှည်ရမ်းပြီး မုန်းနေတယ် ဆိုတာ
အဲဒီ အသိုင်းအဝိုင်း က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မုန်းတာ နဲ့ ယှဉ် လိုက်။
မြင့်မိုရ်တောင် နဲ့ နှမ်းစိ လောက်ကွာမယ်။
မယုံမရှိနဲ့။ ကိုယ့်နား နဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားရတဲ့ အသံတွေ။
အရီး လဲ သူတို့ ကို လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မုန်းစရာ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ငါတစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ် တွေ၊ အချင်းချင်း ဝင့်ကြွားဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ပြည်သူ ဘဏ္ဏာကို ဓားမြတိုက်နေတာ တွေကို တော့ အရမ်းမုန်းတယ်။
သူတို့ လောဘ၊ အတ္တတွေ အောက်မှာ မျိုးဆက်ကလေးတွေ အညွန့်ကျိုး နေရတာ။
သူတို့ တင်လား။ မဟုတ်။
ပြည်ပ က ခွက်ပျောက်သွားသူတွေ ရဲ့ အမုန်း ရန် ကလဲ မသေးဘူး။
ပြည်သူတွေ ထဲ က လူတစ်ချို့ က ရန်သူ ဘယ်မှာ ဆိုတာ မမြင်ဘူး။
ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ခဲပစ်ရာ၊ တုတ်ပစ်ရာ ကို သာ မြင်ပြီး ပြေးလိုက်ကြတဲ့ ခွေးတွေလိုဘဲ။
ခဲ၊ တုတ် ဘယ်က လာတယ် ဆိုတာ ကို ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့ အမျိုး။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မူဆလင်ဘက်ကနေတယ် ဆိုပြီး ဝိုင်းဆဲ သံတွေလဲ ကြားပါ့။
ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီး မှာ ပညာသင်လာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆီမှာ သေးသိမ်တဲ့ အမြင်မရှိဘူး။
လူကိုလူလို့ ဘဲ မြင်တာ အပြစ်ဆိုလို့ မရဘူး။
ဒီ မိန်းမ ဆီက အား ကို လိုချင်ရင် သူ့ အမြင်ကိုလဲ လက်ခံရမှာဘဲ။
လွှတ်တော်ဆိုတာ ဟန်ပြချင်ရင်သာပြတာ၊ မပြချင်ရင်လဲ အဆိုပြုချက် တွေ နဲ့ အများဆန္ဒဖြစ်အောင် အတည်ပြုပေါ့။
ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖက်ကလဲ နားလည်ပြီးဖြစ်မှာဘဲ။
သူ့ အဆိုကို အများက ကန့်ကွက်လို့ စိတ်ကောက်သွားမှာ မဟုတ်။
ဒါထက်မက စော်ကားတာတွေတောင် သည်းခံခဲ့ပြီးပြီ။
သေချာတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ သူ့ကို ပြည်သူတွေက ချစ်ဖို့ အတွက် အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးတိုးတက်ပြီး ကမ္ဘာ့အလည် မျက်နှာပန်းလှဖို့ အတွက် အလုပ်လုပ်နေတာ။
ကိုယ့်မြန်မာမျိုးဆက်ကို အောက်ဆုံး မျက်မှာမရှိတဲ့ ဘဝ က နေ ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ။
ကိုယ်နဲ့ အကြိုက်မတူလဲ သူဘာကြောင့် ပြောတယ် ဆိုတာ အသေချာစဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။
ဒီဆောင်းပါးရှင် ပြောသလိုဘဲ စာများများ ဖတ်ဖို့လိုတယ်။
ကိုရီးရားကား တွေလောက်ဘဲ သိပြီး သူရဲကောင်း လုပ်ပြချင်လို့ မရဘူး။
မြန်မာပြည် ကို နေရာစုံ ကကြည့်ပြီး ဝေဖန်နေတာမို့ ကိုယ့်ဘက်ကနေ အဖက်ဖက်က ပြည့်အောင် အရင်လုပ်ပါ။
ပြီးတော့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အပုတ်ချပါ။ ဆဲပါ။
မတိုင်ခင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှန်ထဲ ပြန်ကြည့် မေးလိုက်ဦး။
ငါ ဘယ်သူ့ အတွက် ဘာအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဆဲနေတာလဲ လို့။
ပြည်သူ လူထု အမျိုးဘာသာ အတွက် ဆိုရင်တော့ မေခလာ့ သီချင်းလိုဘဲ။
“ပြန် ပြန် နောက်လှည့် ပြီးတော့ ပြန်”
ဘယာကြော်ပါ အရီးလတ် … ရေးထားတဲ့ ကော့မန့်လေးကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ် … ။
အရီးရေ။ ဒီ ကော်မန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မမြင်တဲ့ လူတွေက မမြင်နိုင်ဖြစ်တုန်းပါပဲ။
ကျေးကျေးပါ ချစ်တူမ တို့။ :-)
ဒေါ်စု ကို ချစ်နေယုံ နဲ့ မပြီးပါဘူး
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာ မပြောပါနဲ့ ဦး
စည်းကမ်းလေး နဲနဲလေး ၊ ၁%လောက် ရှိလာမယ် ဆိုရင်ကို
ချစ်နေရုံနဲ့ မပြီး ကိုယ့် ယုံကြည်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပြောသလို လိုက်နာဖို့ကလည်း လိုသေးတာကိုး။
ခု အပြုအမူတွေက အနှစ် ၄၀ ရှေ့ဆောင် သွားထားတဲ့ ခေါင်းဆောင် စရိုက်ဆန်ဆန်တွေ ပြုမူနေကြလို့ကိုး။
သူများ စည်းကမ်းရှိ မရှိပြောနေတာထက်စာရင် ကိုယ်တိုင် အရင် အပြုအမူ၊ အပြောအဆို လေး ကို စည်းကမ်းရှိအောင် အမ တို့ အရင် ကြိုးစားရပေမပေါ့။
ဒါမှ တစ်ကိုယ်စီ ကိုယ့်တကိုယ်စာ တာဝန် ကိုယ်စီယူသွားရင် သူများကို လက်ညှိုးထိုးစရာမလို့တော့ဘူးပေါ့ကွယ်။
တရားဥပဒေ ဆိုတာလည်း မပြောလိုပါဘူး။
ဥပဒေက ခုထိ သူတို့ပဲ ထုတ်နိုင်နေပါသေးတယ်။
သမ္မတ ကြီး လက်ထဲမှာပဲ အပိုင်နိုင်ဆုံး ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
၁၀၀% ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အာတီဒုံ။
ဒေါ်စုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လွန်လွန်ကဲကဲ မျက်ကန်းချစ်ပြတတ်ကြတာရော
စဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့ တရားလက်လွတ် ဝေဖန်ပြောဆိုတတ်ကြတာတွေကိုရော မကြိုက်ဘူး။
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်လို ချက်ကျလက်ကျ ပြောပြတာမျိုးကို သဘောကျတယ်။
မျှဝေပေးတဲ့ ခိုင်ဇာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
ထက်မြက်လို့ (အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ကို) ချစ်ခင်လေးစားမိတယ် ဆိုတာထက်
ပိုပြီး ကြည်ညိုတယ် မြတ်နိုးတယ်။ :hee:
ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲရေးထားတဲ့ ဒေါ်စု သရဏံ ဂစ္ဆာမိဆိုပြီး အောက်ဆုံးက ထပ်ဖြည့်ပြီး ရေးသင့်တယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် မပုပ်ခတ် နဲ့..
၂၀၁၅ ရောက်ဖို့ လိုသေးတယ်.. မဲဆွယ်နေကြပြီ။
အခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လည်း လူကောင်းတယောက် အနေနဲ့ မြင်ထားတယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ ဘာမှ သေချာ မသိဘူး။
သေချာတာကတော့.. အခုက မီဒီယာတွေ ပွင့်လင်းလာလို့ သတင်း တခုခု ဆို တလောကလုံး အကုန်သိနိုင်တဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေပြီမို့..
ဒေါင်းတွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခါးပြတ်နေပြီလို့ ထင်တယ်။
အရှေ့ဆုံးက လူ ဘယ်လောက် ထက်ထက် တယောက်တည်း တိုက်လို့တော့ ဘယ်စစ်ပွဲမှ မနိုင်ဘူး။
မလာစဖူး ရွာတော်ရှင် လာသကိုး။
ပို့(စ) ကို သေချာဖတ်ကြည့်မိရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပုတ်ခတ်မိပါ ဆူးမမ ခင်ညား၊။
ရေးသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို က ဒေါ်စုရဲ့ ပါစင်နယ်လတီ သီးသန့်ကိုပဲ ရေးထားတာပါ။
ဘာနိုင်ငံရေးမှ မပါပါဘူး။ သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဒီ အိုင်ကွန်လေးကိုမြင်တဲ့ အမြင်တစ်ခုပါ။
သဘောတူလို ရှယ်မိတာလေးကို ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးနဲ့ စွပ်စွဲပါနဲ့လေ။
၂၀၁၅ အထိ တွေးပြီးလည်း မဲ ဆွယ်ဖို့ မစဉ်းစားမိသေးပါ။ ။
စတေး လောင်းဝေး တူ ဂိုး အွန်။
မဲဆွယ် ပို့(စ) က ဒီလို မလာပါဘူး။ ၂၀၁၅ နားနီးမှ မဲဆွယ် ပို့(စ) စစ်စစ် ရေးပါ့မယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာမသိဘူး ပိတ်ပြောထားလိုက် တဲ့ အတွက်တော့ ကျန်တာ မပြောလိုတော့ပါ။
လောက မှာ အားကြီးသူ အနိုင်ရစတမ်းဆိုတော့က ကျနော်တို့ လည်း ၂၀၁၅ ကို စောင့်ကြည့်ရုံအပြင် မတတ်နိုင်ပါဘူး။
ကဗျာ ပိုစ် ကို ပြောတာ..
ဒီလို​ကောင်းမွန်​​သောစာများကိုပြန်​လည်​​ဝေမျှတဲ့ မ KZ ကို​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။မူရင်းပို့​ရေးသူ ကို​အောင်​ခိုင်​ နှင့်​တကွ ​အောက်​မှာကွန်းမန့်​​ပေးသူများရဲ့ သ​ဘောထားများကိုအလွန်​ကြိုက်​ပါတယ်​။ကိုယ်​က​ခေါင်း​ဆောင်​လုပ်​နိုင်​ရင်​လုပ်​ မဟုတ်​ရင်​​နောက်​လိုက်​​ကောင်းဖြစ်​​အောင်​လုပ်​ ရမှာကိုအခုအများစုက ဂဏန်းလိုလူ​တွေဖြစ်​​နေတယ်​။ဒီလိုလူထဲ ကိုယ်​မပါဖို့ပဲလိုတယ်​လို့ ခံယူကြ၊ကျင့်​သုံးကြပါ။
ကျနော့ တစ်ကိုယ်စာတော့ ဖြင့် ဂဏန်းလို လူထဲ မပါကြောင်း အာမခံပါသည် ခင်ညား။
လူတွေ သဲသဲ လှုပ် မြှောက်ပေးတတ်ကြတာ ကိုတော့ ကြောက်တယ်ဗျ…
အဲ့ဒီ့ သဲံသဲ လှုပ်သူတွေ က မျှော်လင့်ချက်တွေ ကြီးလွန်းပြန်တော့ စိတ်ပျက်ဖို့ လဲ မြန်တတ်ကြလို့ ..
ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်လက် ရှုစားနေပါသည် ပါဘဲ ….
ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် ကိုလည်း အရမ်း မမြှောက်ကြပါနဲ့ ..
ရန်သူကိုလည်း အထင်မသေးကြပါနဲ့ ..
စိတ် စေတနာ ကို အရင်းအတိုင်း သိတဲ့ သူတွေက မမြှောက်ကြပါ ကထူးဆန်း။
ရလိုမှုနဲ့ လိုအပ်တာထက် မျှော်လင့်နေသူတွေက ပို မြှောက်ပင့် ပြောကြတာပါ။
လူချစ်လူခင် များပါတယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကြီးဟာ ထင်သလောက် မကောင်းမွန်မှန်း လက်ပတောင်းတောင် ကိစ္စ ကတည်းက ကျနော်တို့ သိလိုက်ပါပြီဗျ။
သူ့ တို့ အလို မလိုက်ရင် ဆဲ မယ် ဆိုတဲ့ လူချည်းပဲ ကိုးဗျ။
လောလောဆယ်မှာ သူဟာ နိုင်ငံ့ ပုံရိပ် ဖြစ်နေတယ်။
သူ ပြောသမျှ စကားတိုင်းဟာ နိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်ကို သွယ်ဝိုက်လို့တမျိုး တည့်တည့်တဖုံ ထင်ဟပ်တယ်။
လောလောဆယ် သမ္မတဟာ ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်တယ်
ဒါပေမင့် နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာ ဆိုတာနဲ့ သူတို့ကို တွဲ မြင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ လေးစားမှု စစ်တမ်းကောက်ရင်
သူနဲ့ သမ္မတ တန်းတူနီးပါး ရှိလိမ့်မယ်
သူဟာ နိုင်ငံရေးကို လူကြိုက်များဖို့ လုပ်တာမဟုတ်
နိုင်ငံအတွက် လုပ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
လတ်တလော လက်မခံနိုင်စရာတွေ ရှိမယ်
ဒါပေမင့် ရေရှည် အကျိုးအတွက် သဘော တူနိုင်တယ်။
ကိုယ်ပိုင် အမြင်ကို ပြောရရင်
မာဂရက် သက်ချာလို လူမျိုးလို့ လတ်တလော မြင်မိနေတယ်
ဒေါ်စု အရမ်းတော်ပါတယ်.. ဘယ်သူမှ လိုက်မမီအောင်ကို တော်ပါတယ်… သူ့ကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်..သူ့ရင်ထဲက မေတ္တာနဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံတယ်….
ဒါမယ့်…. သူ့ကို သနားတယ်… စကားတစ်ခွန်းအပေါ်မှာ ထင်ချင်တာတွေထင်၊ တွေးချင်တာတွေတွေးပြီး အဆင့်မမီတဲ့ပါးစပ်ပေါက်တွေနဲ့ အဆင့်မရှိတဲ့စကားတွေပြောနေတာကို ခံနေရတာ.. ရင်နာတယ်… ပြီးတော့ သာပေါင်းညာစားတွေပြည့်လာတဲ့ သူ့ပါတီကို အသေအချာ ထိန်းကွပ်ချိန်မရှိအောင်ကို အလုပ်တွေမနားမနေလုပ်နေတဲ့သူ့ကို သနားတယ်….
ချစ်မမ/အလက်ဆင်း/ သဂျား/ မွန်မွန်လေး၊
ကော်မန့်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အကုန်ညီညီ ရပ်ဖို့ကို က ခု ချိန်မှာ လုံးဝမလွယ် တဲ့ အဓိက ကိစ္စဖြစ်နေတာ ထင်ပါတယ်။
မှန်လွန်းလို့ ချောင်ပိတ်တာ ဘယ် ၂ ခါ ရှိပြီလည်းမသိ။
ကျနော် တတိယ နှစ်မှာ သူ ဟောပြောပွဲ တစ်ခါ နားထောင်ဖူးပါတယ်။
ပြည်သူတွေကို လိမ်ရဲညာရဲတဲ့ အစိုးရဟာ…
ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ မလုပ်ရဲတဲ့ အကုသိုလ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး)))
အဲ လို ပြောသွားတာလေး ကြားဖူးပါရဲ့။
ရေးပေးထားတဲ့ စာကိုပဲ ဖတ်ပြနိုင်တဲ့…
ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်မရှိတဲ့..
ကြိုးကိုင်ခံတဲ့ ခေါင်းဆောင် မျိုးထက် တော့ ..
အမှန်ပြောပြီး ခေါ်တဲ့ ဆေးခါးကြီး တိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မို့ ချစ်သဗျာ။
အမေစု ဟာ သူမတူအောင် ချောမောလှပသူပါ။ ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုက အသက်ထောက်သွားလို့။ ငယ်တုန်းက တကယ်ချောတယ်။ ရက်ရက်စက်စက်လှတယ်။
သို့သော် … သို့သော်… အထက်က ဆူး ပြောသလိုပဲ။ တစ်ယောက်ထဲတိုက်လို့တော့ ဘယ်စစ်ပွဲမှ မနိုင်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာက သီလတွေ သမာဓိတွေ သိက္ခာတွေ မေတ္တာတွေ မဟုတ်၊ နည်းနည်းညစ်ပေးမှ ကောင်းတယ်။ ငါးမျှားချိတ်ကို အဖြောင့်ထားပြီး ငါးဖမ်းရင် ငါးမိနိုင်မလား။
ခါတလေ သူ့ကို အားမရတာ မညစ်လို့ဗျ။
အဲဒီလိုနဲ့ လူညစ်တွေရဲ့ ကလေးကွက်တွေက သာ တာ ဘယ်နှစ်ခါရှိပြီတုန်းမသိ။
သေသွားပြီဖစ်တဲ့ ဆြာခင်မောင်နိုင်-အဖေ နဲ့ စကားပြောတာထိုင်နားထောင်ဖူးတယ်. .. (အဲ့ ဘိုးတော် က အင်-ယာကိုးဗျ..)
သူဘောလုံးတပွဲအကြောင်း ထိတွေ့ပုံက သိပ် နည်းစနစ် ဆန်တယ်.. သိပ်ပြီးတော့လည်း ခြားနားတဲ့အမြင် ဆန်တယ်…
အဲ့သည်တုန်းက သူရို့ မန်ယူအသင်း ၂၀၀၄-၅ လောက်ထင်တယ် အကြောင်းပြောနေကြတာဗျ..
နာမည်ကျော် ကွင်းလယ်ကစားသမား ရွိုင်ကိန်း နားတော့မယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပေါ့ဗျာ..
ဘောလုံးအသင်း ဆိုတာ ဆိုးပေ ရှိရတယ် ..(တိုက်ဆိုင်ရင် ဆိုးပေ အကြောင်း ရေးပါဦးမယ်လေ..)
ဆိုးပေဆိုတာဗျာ ..အနီကတ် ယူသင့်ရင် ယူရတယ် ဒိုင်လူကြီးကို နင်ပဲငဆ ဆဲရင်လည်း ဆဲရတယ်…
တဖက်က သိပ် ခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ လူ ပါလာတဲ့အခါ ဒင်းကို လူချကစားသင့်ရင်လည်း ကစားရတယ်..
ဖိုက်တာလုပ်သင့်၇င်လည်း လုပ်ရတယ်… ရွိုင်ကိန်း ဆိုတာ အဲ့လို ကတ်ပီတန် ဗျ…
သူ့နေရာ ယူမယ့် နောက်တန်းက ဂယ်ရီနဗီးလ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် က သိပ်ကို အင်ဂလိကန် လူကြီးလူကောင်း
ဆန်လွန်းနေတော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး … နစ်ကီဘတ်ကလည်း ခြေစွမ်းဆိုတာထက် ..မိုက်မဲပြန်တယ်..
အိုက်ဒလို … အက်သစ် ဘက်ကပြောရရင် လူချ ကစားတာက မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့..
မြက်ခင်းစိမ်းတွေထဲက ဆိုးပေတွေအကြောင်း ပြောပါဆိုရင် ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲက အသိသာဆုံးပဲ..
မက်တာရာဇီ ဆိုတဲ့ အဇူရီ တို့ရဲ့ ဆိုးပေလေ… အဲလက်ဇန်ဒရို နက်စတာဆိုတာ သမိုင်းတလျောက်
(ပီလီ ရွေးတဲ့) အကောင်းဆုံး ဘောသမား ၁၀၀ စာရင်းဝင်တဲ့လူ တိုက်စစ်မှူးတိုင်း အကြောက်ရဆုံး
လေထဲမှာရော မြေပြင်ပေါ်မှာပါ ဥပဒေအတွင်းက အတားဆီးနိုင်ဆုံးသော ကစားသမား..
တချိန်က မာလ်ဒီနီ-နက်စတာ-ကန်နာဗားရိုး လို့ ဆိုလိုက်ရင် တော်ရုံတိုက်စစ်သမား ဒူးတုန်တဲ့
ကာတီနာချို အတွဲ ..ထားောတ့ ..နက်စတာ နာလို့ မက်တာရာဇီ အရံအနေနဲ့ ၀င်ကန်တယ်..
(ခြေစွမ်းအရတော့ ဟိုအဘိုးရီးကိုမမီပါဘူး) ဒါပေသိ အနှီ ဆိုးပေကြီး က ဖိုင်နယ်မှာ
အစောပိုင်း က ခြေပခေါင်းတိုက်ဂိုး ကို သွင်းတယ် ..နောက်ပိုင်း (၁၁ယောက်ချင်း ဆက်ကန်ရရင် ရှုံးနိုင်တယ်..)
ဇီဒန်းကို အနီကတ်နဲ့ ထွက်အောင်လုပ်တယ်..ဆိုးပေ ဇီဒန်းကို ဘာပြောခဲ့သလဲ တရားသလား မတရားသလား ကိုဘေးချိတ်..
သူ့တိုင်းပြည်ကို ဘရာဇီးနောက် ကမ္ဘာ့ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်း စာရင်းဝင်အောင် လုပ်ပေးခဲ့လို့ ..ဆိုးပေကို ချစ်ကြတယ်…
အဲ့သလို ..အက်သစ်တို့ ဘာတို့ ဘက်ကပြောရင်တော့ ဘောလုံးအားကစား ညစ်နွမ်းစေတဲ့ တရားခံ ဘာညာပေါ့ဗျာ …
သို့သော် So what???
ဆိုကြပါစို့ ကျနော်တို့ ဘောကန်ကြတယ်… တဖက်အသင်းက ဘာကာ ဗျာ ..
မက်ဆီ ဆိုတဲ့ အကောင် အလိမ်အခေါက် စိန်မျောက်မျောက် လာလုပ်နေလို့ ခြေစုံပစ်ဝင်ပလိုက်တယ်..
ကိုယ်(ဆိုးပေ) အနီ ထိမယ် မက်ဆီ ဆေးထိမယ်… ကိုယ်(ဆိုးပေ) မပါတဲ့ ကိုယ့်အသင်းက မက်ဆီမပါတဲ့ ဘာကာထက်
အသာစီး ရနိုင်မယ်ဆို ကွကိုယ် စတေးရမယ် ဆိုတာ အသိသာကြီးပါပဲ…။
ကောင်းဘီ ..ဘယ်မတုန်း ဘွားတော် အတွက် ဆိုးပေ…။
ကျန်းမာရေးမကောင်းရှာတဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့ ထမိန်ထုတ်လိုက်ထမ်းပေးတဲ့ အမတ်ကလေးလား ..??
အနုပညာ အင်မတန် ၀ါသနာကြီးပီး အလွန် နုဖတ်နေတဲ့ ဟို မိန်းမမရသေးတဲ့ ချစ်ကိုယီးလား ??
သွသူတောင် ခုအရွယ်ရီးထိ မိဘကို ဒုက္ခပေးနေရတုန်း..။
ဆိုးပေ လိုပါတယ်ဗျို့ ….။
ဆိုးပေ ဆိုးပေ ဆိုးပေ
အွန်လိုင်းက ကီးဘုတ် တော်လှန်ရေးသမားတွေက လွဲရင် (ကိုယ်တိုင် အပါအဝင်)
မရှိ မရှိ မရှိ….
လောက်လောက် လားလား အားကိုး စရာ….
ဆိုးပေ တင် မ က ၊
သူ့ နောက်မှာ ခလိုနီ ဝါ ပြာ မျိုးလည်း မရှိ၊
သူ့မှာ သူ က လွဲ ရင် ဘူမှ မရှိ။
သူ့မှာ လက်သီးမထိုးတတ်ဘဲ အချစ်အကြောင်းပြောတဲ့ ငတိလေးတော့ ရှိပါတယ်ကွယ်.. ကွိကွိ….အားကိုးလောက်စရာ..
ကျုပ်တို့ လူလေးများက အချစ်အကြောင်း ပြောလို့ ရဘူး။
အဟွာနဲ့ ချိန်မှ ရမှာ။
တောပြန်ပြီး သေနတ် ရောင်းတော့မယ်။
သရက်သီးတို့ သံပုရာသီးတို့ နဲ့။
၉၆၉ သမားများကို ဆိုးပေအတွက် စီဗီတင်ခိုင်းကျိပါရား…..
ကျုပ်က အမေ့သား နော် ….အချဉ်မှတ်ပီး လျှော့မတွက်နဲ့ …
အမေ့မျက်နှာ တချက် အညိုမခံဘူး ဟေ့ …
အာမခံ မရဘာဘု ဆိုတဲ့ ပုဒ်မတောင်
ဟိုဖျားကျောင်း လူယီး ဒွေ လျှော်ပေးခဲ့ရတာ …
ပြောဘာဒယ် အမေ့မျက်နှာ ကြီးဘာဒယ်ဆို ….
ဘယ် အမေ တုန်း သိလား …
အမေ ..အမေ .. အမေရေယဉ်ပါ …
P.S ဂတ်တူဆိုကြီး ပြောသွားတာ သဘောကျဒယ်..
အမေ ရေယာဉ် ကို ကြောက်ဖို့၊ ကိုးကွယ်ဖို့လောက် သာသိတဲ့ အသိရှင်ကြီး ကိုး။
ဝုတ်…ဝုတ်… အရီးလတ်ပြောလို့ ကြောင်ဖစ်ပီး ခွေးလိုအော်ရဒါလောက် အောက်ကျတာ မစိ မစိ.. ဘာဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ မြန်ကျင့်ဒေသ အကြီးအကဲ ဘွားဒေါ်ဂျီးဂို မလေးမစား အလုပ်ကြနဲ့… ထပ်သတိပေးမယ် ဝုတ်.. ဝုတ်…
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး အန်တီပဒုမ္မာရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အဟံ ပထမံ ဆိုတာလေး သတိရမိတယ် ..
လောလောဆယ်5plus ရုပ်သံလိုင်းကလာနေတဲ့ ဂန္ဓ၀င်တွင်တဲ့ သူရဲကောင်းစစ်သည် ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားရာဇ၀င်ကား ကြည့်မိတော့လဲ အဲဒီလိုပဲ တွေးမိတယ် … ရှေးခေတ်က ဘုရင်တွေများ တော်လိုက်ကြတာလို့ .. သူတို့ကိုသစ္စာခံတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အဟံ ပထမံ စိတ်နဲ့ အသက်စွန့်ကြတာ ..
ခုခေတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့များ ကွာပါ့ ..
ကျနော် က အာတီဒုံ ပို့(စ) ကို ဖတ်မိပြီး သူ့ အကြောင်းကို တွေးမိတာ မဝေ ရေ။
ကုသိုလ် ကံ များ ကွာလေသလား မသိပါဘူးရယ်။
လူတွေရဲ့ အလေးအနက်ထားတဲ့ စိတ်တွေ ကွာသလား မပြောတတ်ပါဘူး။
လုံး ဝ မတူတော့တာတော့ အမှန်ပဲရယ်။
တကယ်တော့ သူရဲကောင်းဆိုတာ သတ္တိမရှိဘု လို့ အပြောခံရမှာ ကြောက်တဲ့ ငကြောက်ကြီး ဒွေပါဗျာ…
အဲ လာ ဆို ဒို့ ဆီ မာ လူကြောက် တွေ မရှိဘု။
မှိုတက်နေတဲ့သစ်သီးတစ်လုံး
ဒါပေမဲ့ စွဲလမ်းမှုအကြောင်း
(မြားနတ်မောင်၊ ဇွန်လ၊ ၁၉၉၂ ခု)
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၁ က ကဗျာလေး။
အဲတုန်းကတော့ ကျော်ကြားမှု နောက်မခံတော့
ဒီ စကားလုံးတွေကို “ကျော်” ပြီး ” ကြား” ခဲ့ ကြတယ်ထင်ရဲ့။
ဒါ ကို မသိလိုက်ဘူး။
အခုမှ အတိုးနဲ့ ငို ပါရစေတော့။
မခိုင်ဇာရေ ပို့စ်ကိုကြိုက်လွန်းလို့ facebook မှာ ရှဲလ်ခွင့်ပြုပါလားရှင့်
ရှယ်လို့ လည်း ရပါတယ် ညီမလေး။
အပေါ်က လင့် က ကိုအောင်ခိုင်ရဲ့ ဖဘ ပါ။
သူ့ ဆီက ရှယ်လည်း ရပါတယ်..
၁၀ ချက်စလုံးမှာ ၁၀၀ % ဆိုတာကတော့ လက်ခံဖို့ စဉ်းစားစရာပါ ၊
အနီးဆုံး ယှဉ်ရမယ့်သူကလည်း မရှိတော့ ခက်ပါတယ် ၊
ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ကိုယ်ကောင်းနေရုံနဲ့ မပြီးပါ ၊
နောက်လိုက်ကောင်းတွေ မွေးထုတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ် ၊
၁၉၈၉ ကနေ ၁၉၉၂ အထိ ရုံးချုပ်မှာနေခဲ့သူမို့
ဘာတွေလိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ . . . . . .
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မခိုင်ဇာရေ ဒီပို့စ်က လူတိုင်းဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အပေါ်ယံအတွေးတွေနဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်မနေကြပဲ အရှေ့ကိုများများကြည့်ပေးဖို့ လိုနေပါသေးတယ် အမရေ
ဦးအောင်ဆန်းတုံးကလည်း.. ဒေါက်တာဘမော်အပါအ၀င်.. အဲဒီခေတ်က ဘိုးအေကြီးတွေ.. “ချ”တာပဲ..
ဒါပေမယ့်.. သခင်အောင်ဆန်းမှာ.. ဂီဂီပြောတဲ့”ဆိုးပေ”လည်းရှိတယ်.. ခေတ်ပြိုင်လူကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်..
အဲလို သမိုင်းတော့ တစ်ပတ် မလည်ပါရစေနဲ့ တဂျီးရယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ပြောစရာအပြစ်မရှိရင် သူ့ အနီးက သူ့နောက်ကအပြစ်ပြောလို့ ရနိုင်သူ တွေ ကို ဝိုင်း လက်ညိုးထိုး မှာ သဘာဝဘဲ။
ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရှေ့တန်းက နေနေသူ တွေ မှာ အများကြီး တာဝန်ရှိလာပါတယ်။
အဲဒီတာဝန်ကို တကယ်ဘဲ ကျေအောင်ထမ်းဖို့ အရည်အချင်း ရော၊ စိတ်ဆန္ဒပါ ရှိရပါမယ်။
မဟုတ် လို့ ကတော့ သင့်သူ ကို ရှေ့တင်ပြီး ကိုယ်က နောက်ဆုတ်နေသင့်တယ်။
လက်ရှိမှာ နေရာ မလုသင့်ဘူး။
မဟုတ်ရင် အတိုက်အခံ ကိုယ်တိုင်တွေ ကလဲ အာဏာရူး ဖြစ်ပြီး ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်။
သူကြီးရဲ့ နှစ်တစ်ထောင် ကျိန်စာ လက်ညိုး ကလဲ လွတ်မှာ မဟုတ်။
အချုပ်ထဲထည့်တဲ့ ကျုပ်ကမှ အတော်ဗုံးကွ
အို !!! သူ အတော်ဆုံးပါပဲ။
အဲလာကြောင့် သမင်လည်ပြန်ရော၊ ခြင်္သေလည်ပြန်ရော …..
ဘယ်လည်ပြန်မျိုးနဲ့မှ လှည့်မကြည့်စေချင်လို့ ဘယ် လည်ပြန် သီချင်းမှ မဆိုရဲ တဲ့ ဘဝတွေ …..
သူ့ စိတ်ကြိုက် တင်ခဲ့တဲ့ စစ်ကဲကြီးကို တောင် ချေးမများရဲတဲ့ ဘဝပါလေ။
ကျမ တို့မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ကသူမကိုဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ချင်နေကြတယ်။ သူမကို ဂရုစိုက်ကြင်နာပြပြီး ကိုယ်လိုချင်တာတွေပဲတွေးတောနေကြတယ်။ သူမ ဘာလုပ်နေတယ်။ဘာအတွက်လည်း။ ဘာရည်ရွယ်ချက်လည်း စဉ်းစားတဲ့အလေ့မေ့လျော့နေခဲ့တယ်။ စကားလုံးတွေမှာ သူမအပြစ်ကိုရှာနေကြတယ်။ သူမကဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းပြဦးဆောင်သူပါ။ ကျမတို့ဘယ်လမ်းသွားမလဲရွေးချင်ခွင့် သိပ်ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအကျိုးဆက်ကို ကျမတို့နဲ့ အတူကျမတို့ရဲမျိုးဆက်တွေ ဆက်ခံရလိမ့်မယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အတွက် ထိရောက်တဲ့ အကျိုးခံစား ခွင့် ပြည်သူတိုင်းတန်းတူခံစားခွင့်ရမဲ့နေ့ ဘယ်သူ ဖန်ဆင်းပေးမှာလည်း။ တိကျပြတ်သားတဲ့ ဥပဒေ အရိပ်အောက်မှာ စိတ်လုံခြုံမှု ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးမှာလား—?
ဘယ် အချိန်ထိ သူ ရဲ့ တည်ရှိခြင်းနဲ့ ထိုက်တန်မလည်း ကြည့်နေရုံအပြင်….
သူအိမ်နိမ့်စံစဉ်လို့ပဲသုံးရမလား(မီးခဲကို ပြာအတင်းဖုံးခံထားရတဲ့ ကာလတုံးက)
ခုလို အမြင့်စံ(ရဲရဲငြီးသေား မီးလျှံဖြစ်ချိန်မှာ)အဲဒီသူတွေက ဝေးဝေးကပဲ ပီတိဖြစ်ကျေနပ်နေကြတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
အဲသလို အနစ်နာခံ နာမည်မယူတဲ့သူတွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု လေးစားပါတယ်။
ခုလို အမြင့်စံ(ရဲရဲငြီးသော မီးလျှံဖြစ်ချိန်မှာ)အဲဒီသူတွေက ဝေးဝေးကပဲ ပီတိဖြစ်ကျေနပ်နေကြတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
ဖတ်တွားဒယ် သိလား …
ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဘာမွှ မပေါဒတ်ဘာဝူးးး
ဂုလိုဘဲ မန့်တွားဒယ်နော် ….
အစ်မရေ..ကျမကတော့ ညဏ်လည်းမမှီဘူး.. သိပ်လည်းမလေ့လာမိဘူး.. မြင်မိသလောက်လေး ခံစားမိတာတော့ သူ့ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်မှုကိုသဘောကျတယ်.. သူ့ အဖွဲအစည်းနဲ့တွဲလိုက်ရင်သိပ်သဘောမကျချင်တော့ဘူး.. အောက်ခြေမှာလုပ်နေတာတွေကတော့ ထူးမခြားနား ပတ်ပျိုးပဲလို့ ခံစားရပြီး သိပ်ဘ၀င်မကျဘူး
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်နောက်မှာ ပြည်သူတွေသာ ညီညွှတ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ ပါကြမယ်ဆိုရင်။
ခေါင်းဆောင်ကလည်း ပြည်သူအပေါ် မညာဘူး မလှည့်စားဘူးဆိုရင်။
ပြည်သူကလည်း ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် အကျင့်စိတ်ဓာတ်ကို အမြဲလေးစားကြမယ်ဆိုရင်။
ခေါင်းဆောင်ကလည်း ပြည်သူအမြဲလေးစာထိုက်အောင် အနေမှန်တယ်ဆိုရင်။
ဒို့ တိုင်းပြည်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရယူပေးခဲ့သော လွှတ်လပ်ရေးကို ပေါ်လစ်တင်သလို အရောင်းထွက်ကာ ရှု့မညီးစရာ ပြည်မြန်မာ ပင်ဖြစ်ပေမပေါ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ ထို ခေါင်းဆောင် ဟာ ဘယ်သူဖြစ်သင့်သလဲ သင်တို့ရှာတတ်ပါစေလို့ဘဲ ပြောရမှာပေါ့လေ။
ဒီပို့စ် တက်လာကတည်းက ဖတ်ပြီး
ကွန်းမန့်ရေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်…။
ဘယ်လ်ိုမှ စဉ်းစားလို့ မရခဲ့ပါဘူး…။
အခု ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရလိုက်လို့ ကွန်းမန့်ရေးမယ့်အချိန်ကျတော့
မရမ်းကုန်း စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဆရာညီမင်းညို ရွတ်သွားတဲ့
ဆရာ မိုးဃ်ဇော် ရဲ့ အမေ ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပါ…။
အမေ စု ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် လည်း အမှတ်တရပေါ့…။
ငါတို့ ပြည်သူ သန်းခြောက်ဆယ်…။
ကဲ ကို ကဲ လွန်း တယ်
ဆိုတဲ့လူတွေ အတွက် ရေးထားတဲ့ ကဗျာလို့တောင် ထင်ရပါတယ်…။
ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်စု ကို သဲသဲလှုပ်ပါပဲဗျာ…။
Thank You So Much for the poem., Bro Black.
တိတ်ကြိုးတွေ စောင့်ဆွဲထုတ်ပြီး ပစ်ချ လွှင့်ကျဲပစ်လိုက်ပေမယ့်
အဲ့ဒီကြိုးတွေ လမ်းမတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်စီးဆင်းသွားတယ်ဆိုတာ သူတို့မှ မသိပဲ။
ဦးခေါင်းတွေကို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အတင်းဝင်ရောက်ရိုက်ခွဲခဲ့ကြတယ်
သွေးသံရဲရဲကြားက ဥာဏ်ပညာတွေ ဆက်ကာဆက်ကာ ပွက်ပွက်ဆူ ထတောက်တုန်း။
ပင်လယ်ရဲ့အနားသတ်တွေလို ပခုံးသားတွေကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ ခုတ်ဖဲ့ခဲ့ကြတယ်
သွေးနုသားသစ် အသားတစ်တွေ ဆက်ကာဆက်ကာ အသစ်သစ်ထွက်လာနေတုန်း။
သူတို့ ငါတို့ကျောပြင်တွေကို စစ်မြေပြင်လို ဒရကြမ်း ဓါးတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးခဲ့ကြတယ်
ဓါးတွေဟာ ကွေးညွှတ်ပြီး သူတို့ဆီ ပြန်သွားခဲ့ကြတာ သူတို့ မသိလိုက်ခဲ့။
သူတို့ ငါတို့ရင်ဝတွေကို ဘောလုံးတစ်လုံးလို ခြေထောက်တွေနဲ့ ပြေးပြေးပြီးကန်ခဲ့ကြတယ်
သမိုင်းဟာ အဲ့ဒီမှာနစ်ပြီး တရားခံဟာ အဲ့ဒီမှာကြိုးကွင်စွပ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သူတို့ မသိလိုက်ခဲ့။
အဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာ ဟားတိုက် ရယ်မောနေကြတယ် အဲ့ဒီညက
သင်္ချိုင်းက ထလာသလို မိန်းမပျက်တွေ။
အဲ့ဒီမှာ ဖြူပတ်ဖြူရော် သွေးလိုနေကြတဲ့ လမ်းဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေလို့ သေနေမှန်းမသိတဲ့ ဖုတ်အသွင်းခံထားရတဲ့ ယောက်ျားတွေ။
ရိုက်ဟ ရိုက်ဟ သတ်ဟ သတ်ဟ ဖြတ် အပြတ်ဖြတ် အမြစ်ကဖြတ် အသံတွေ အသံတွေ
အဖေ့ကိုအပြုတ်လှဲပြီး သမီးကို နောက်ထပ်အပြီးခုတ်လှဲဖို့
အမှားနဲ့အမှန်မသိရတဲ့အခါ ။ လက်ကိုင်တုတ်များ ။ နေ့စားများ ။ အပင်းထည့်ခံထားရသူများ
တလွဲမာနနဲ့သေတဲ့အခါ အသူရကာယ်မှာ ဖြစ်ကြရသတဲ့။
ဟိုဘ၀မှာ ငရဲလို နှစ်အသင်္ချေ ငိုပေရော့။
မိုးလင်းရင် အမှောင်ထဲ ပြန်လည်စိမ့်ဝင်ပြီးရင်း စိမ့်ဝင်သွားကြပေရော့။
ရော့ ဒီမှာ ကျည်ဆံတစ်ထောင့်
သေနတ်နဲ့ ကျည်ဆံတွဲထားမှ ထ လာနိုင်တဲ့ သတ္တိတွေ။
ဒီမှာ တရားကလွဲလို့ ဘာမှမရှိတဲ့လူအုပ်ကြီး ပစ်လေ
လူနဲ့ သေနတ်တွဲထားမှ ရှိနေတဲ့ သတ္တိတွေ။
အလင်းတစ်ခုအတွက် အမှောင်ကို ဖေါက်ထွင်းနေတဲ့ လူအုပ်ကြီး
လူအုပ်ကြီးနောက်မှာ ကလေးတွေ သားသည်အမေတွေ အိုကြီးအိုမတွေ
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ လှံသွားဟာ နှလုံးသားဘေးက ပွတ်ကာသီကာထွင်းဖေါက်သွားခဲ့တယ်
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ နတ်သမီးကိုဆယ်ရင်း လူတစ်ချို့ရေတိမ်နစ်ခဲ့ရတယ်
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ခင်ဗျားတို့ထွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ကွမ်းတံတွေးဟာ ကျုပ်တို့ရင်ဘတ်ပေါ် သွေးအဖြစ် လာစွန်းထင်းခဲ့ရတယ်။
ဘာနဲ့ချွတ်ချွတ် မကျွတ်တော့မယ့် အစွန်းအထင်းတွေ
၂၀၀၃ မေ ၃၀ ရက်
ဒီမှာ ရက်စက်သော အတိတ်ရဲ့လိပ်ပြာတွေ
ဒီမှာ ရက်စက်သော အတိတ်ရဲ့ဝိဥာဉ်တွေ
ဒီမှာ ရက်စက်သော အတိတ်ရဲ့ အရိုးတွန်သံတွေ
လျှောက်သွားနေတယ် ထကြည့်လေ ခင်ဗျားတို့ရဲ့စကော့ဝီစကီပုလင်းတွေထဲမှာ
လျှောက်သွားနေတယ် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဆီဦးထောပတ် ရွှေပန်းကန်တွေရဲ့အထဲမှာ
ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရေချိုးခန်းတွေနဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေပေါ်မှာ။
ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာလေးတွေရဲ့ကျောင်းလွယ်အိတ်အတွင်းက ဗလာစာအုပ်တွေထဲမှာ။
မမြင်ရတဲ့ဓါးသွားတွေရဲ့ လက်တုန့်ပြန်မှုနဲ့ ခင်ဗျားတို့အိပ်မက်ဆိုးတွေထဲ အကြိမ်အကြိမ်
ဘယ်နှစ်ခါ ခင်ဗျားတို့သေဆုံးခဲ့ပြီလည်း။ခြံထောင့်မှာ ရိပ်ကနဲ
ညည မိသားစု ဖွင့်ကြည့်နေတဲ့ တီဗီဖန်လ်သားပြင်ပေါ်ခုန်ခုန်တက်လာတဲ့အော်သံနဲ့ဝိဥာဉ်တွေကြောင့်
တီဗီကို ခင်ဗျားတို့ယောင်ယောင်ပြီး ပိတ်ခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေ ခု ၁၀ နှစ်ပြည့်ပြီပဲ။
လည်နေတဲ့ CD အချပ်အပြားပေါ် အစင်းကြောင်းတွေထင်အောင်
ဓါးထောက် သေနတ်ထောက် ခင်ဗျားတို့ဖျောက်ခဲ့ပေမယ့်
သွေးအလူးလူးနဲ့ယုံကြည်ချက်သီချင်းတွေက နန်းတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပြဿာဒ်အထိ ရင်ကော့ပန်းထွက်နေတုန်းပဲ။ ။
4 June 2013 at 5:50pm
Next post will be some of his poems referring to DASSK.
I like to read the poems in these days.
ဦးဘလက်ရဲ့ ကဗျာကိုဖတ်ရတော့မျက်ရည်ဝဲသွားတယ်။ ဒေါ်စုက ကျမရဲ့ HERO ပါပဲ။ သူလို့ကြံ့ခိုင်အောင်..ခွင့်လွတ်တတ်အောင်.စကားကိုအလျင်စလိုမပြောအောင်. အတင်းကြိုးစားတည်ဆောက်နေတုန်းပါပဲ။ ဘာမှတော့မစွန့်လွတ်ရဲသေးဘူး။
ရမ်း… ရမ်းကို ထောက်ခံပါဒယ်.. ဆွိ…
ဆွိလို ကျော်ကြားချင်သူများကျတော့လဲ တောက်မဲ့ မီးခဲ တရဲရဲဆိုသလို…